आज असार ३ गतेका मुख्य समाचार – बाढिले सयौं बेपत्ता, यर्पोट खुल्दै, ज्ञानेन्द्र शाही, रबि,गाडी,राहत – Classic Khabar
आज असार ३ गतेका मुख्य समाचार – बाढिले सयौं बेपत्ता, यर्पोट खुल्दै, ज्ञानेन्द्र शाही, रबि,गाडी,राहत
June 17, 2021 125
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा २८२८ जनामा कोरोना संक्रमण, थप ५२ जनाको मृत्यु । कर तिर्न सरकारले दियो असार २५ गतेसम्मको समय । केही घण्टाअघि सुरुङ बन्द गर्दा ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो मेलम्ची आयोजना । झलनाथ खनालको वक्तव्यले नेपाल समूहमा खैलाबैला । परराष्ट्रमन्त्री भन्छन–चीनबाट ४० लाख खोप ल्याउँदैछौं । बाढी-पहिरोबाट थप क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ।
एमालेले सरकारलाई भन्यो : विपत्तिमा परेकाहरुको तत्काल उद्धार गर । प्रधानमन्त्री ओलीलाई झलनाथ खनालले भने- जसरी हुन्छ पार्टी मिलाउनुस् । ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्रकार धम्क्याएकोमा महासंघको विरोध । नेपाललाई एस्ट्राजेनेकाको १४ लाख डोज खोप सहयोग गर्न डब्ल्यूएचओको अपील । नेप्से परिसूचक ३ हजार तल झर्‍यो, सेयर बजार सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी ।
झलनाथ खनालको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो, यो षड्यन्त्र हो : जगन्नाथ खतिवडा । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आठजना सम्पर्कविहीन । रोकिएका लोकसेवाका परीक्षा साउनपछि, भाैतिक उपस्थितिमै हुने । अखिलको राहत र उद्धार टोली सिन्धुपाल्चोक प्रस्थान । बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई सरकारले ५० हजार राहत दिने । बाढी, पहिरो र डुबान :६ जनाको मृत्यु, १४ बेपत्ता, ३३ जिल्लाका ९९ ठाउँमा बाढी ।
आजबाट फेरी बाढी पहिरो र डुबान हुन सक्ने जिल्ला कुन कुन रहेका छन् त यसबारे महत्वपुर्ण सुचना । ४० लाख डोज चिनियाँ खोप किन्ने सरकारको निर्णय । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २७ सय ४६ वटा सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा । कुन कुन देशमा उडान खुल्न लागे यसबारे पुरै जानकारी । बाढीको जोखिमबारे पूर्व जानकारी पाउन ११५५ फोन गर्न सकिने । मनसुन अझै सक्रिय, धेरै स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने । रबि लामिछानेले दिए नेपाल सरकारलाई कडा सुचना यसबारे पुरै जानाकारी ।
Prevश्रीमती खान बनाउदै थिईन उता श्रीमान भने बाढी आयो भनेर माछा पोखरीमा कुलो थुन्न जादा बाढीले बगाएपछी नाबालक छोरालाई अंगालोमा बेर्दै गरिन बिलौना (भिडियो)
Next…. त्यसपछि छोरीलाई आफ्नै भैँसी गोठमा लगी…..
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, जेष्ठ १५ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भूपेन्द्र घ’टनामा फेरि अर्को ड’रलाग्दो ‘ट्वि’स्ट’ फेला पर्यो, यस्ताे सम्मको प्र’माण भेटियो
दार्चुलाका जयसिंह धामीको तुइन चुँडिएर महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? बोले सभामुख
‘म चितवनबाट हिँड्दा पनि प्रचण्ड तर्सिँदा रहेछन्’
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (858)